YPG Series Pressure tenan'ny fanamainana - China Changzhou Daming fanafody Fitaovana
Description Ny ranon-javatra na ara-nofo dia apetaho manta sprayed ho Mini rano mitete amin'ny nanery atomizer izay Misarika fanampiana avy amin'ny fanerena na diaphragm paompy, sy namaoka haingana amin'ny alalan'ny fifanakalozana hafanana. (10-90 sec) Ela ny ela ka ny vovoka na kely granule Vita. Endri-javatra 1. namaoka ny hafainganam-pandeha dia mety noho ny fifadian-kanina sy namaoka mafana indrindra fahatsapana zavatra. 2. Ny vokatra vita ny baolina granule amin'ny fanamiana habeny. Ny fluidity sy ny solubility tsara. Ny fahadiovan'ny vokatra dia avo sy ny iadian-kevitra ...
Ny ranon-javatra na ara-nofo dia apetaho manta sprayed ho Mini rano mitete amin'ny nanery atomizer izay Misarika fanampiana avy amin'ny fanerena na diaphragm paompy, sy namaoka haingana amin'ny alalan'ny fifanakalozana hafanana. (10-90 sec) Ela ny ela ka ny vovoka na kely granule Vita.
1. namaoka haingana dia haingana sy namaoka mety ho fitaovana tena fahatsapana mafana.
2. Ny vokatra vita ny baolina granule amin'ny fanamiana habeny. Ny fluidity sy ny solubility tsara. Ny fahadiovan'ny vokatra dia avo sy ny kalitao tsara.
3. izany fangatahana sehatra malalaka. Araka ny toetra ny manta fitaovana, dia mety mampiasa ny rivotra mafana mba ho maina, ary mety koa ny mampiasa ny granulate rivotra mangatsiaka. Manana hifanaraka amin'ny zava-mafy ny akora.
4. Ny asa dia tsotra sy mafy orina; ny fanaraha-maso Tsotra sy mety, mora mahatsapa mandeha ho azy fandidiana.
Habetsahan'ny mientona ny rano ary
Amin'ny ankapobeny habeny (O * H)
Fanerena ny paompy
Mari-pana ny rivotra Inlet
Raw fanangonana ara-nofo
Raha ny mari-pana dia ambany noho ny 200 ℃, ny masontsivana kajy dia tokony ho azo ampiharina araka ny toe-javatra.
Electric + etona
Hot rivotra lafaoro lehibe
1 Ny habetsahan'ny mientona ny rano ary dia mifandraika amin'ny toetra ara-nofo ny manta sy ny mari-pana ny lasa etona. Ny masontsivana in table dia kajy ho 150-160 ℃
2 Customer afaka misafidy fomba paharitry samy hafa toy ny hoe: amin'izao fotoana izao etona, countercurrent etona sy ny vovoka miverina paharitry hitsena ny fitakiana ny vokatra.
3 Ny tabilao mikoriana Sketch fotsiny ho an'ny fampisehoana, mpanjifa afaka haka subassembly araka izay nilainy avy.
Tsy azo ampiharina amin'ny foodstuff, fanafody, orinasa simika, dyestuff, seramika, biochemical, plastika indostria sy ny sisa.
Previous: XSG Series miodina Flash fanamainana
Next: YZG, FZG Series Vacuum fanamainana
Centrifugal price fanamainana
Haingam-pandeha Centrifuging Ary fanafody maina kokoa
Industrial tenan'ny maina kokoa
Industry namaoka Machine Fa Chemical tenan'ny fanamainana
Lab tenan'ny fanamainana
-Dronono tenan'ny namaoka Machine
Pressure fanafody maina kokoa
dipoavatra maina kokoa
tenan'ny fanamainana Machine
Price namaoka Machine
Price Type fanamainana
Zpg price fanamainana Fa dity Material
YZG, FZG Series Vacuum fanamainana
XSG Series miodina Flash fanamainana